Ny fifamofoana dia tsy mari-pamantarana fampisehoana (KPI) ho an'ny ankamaroan'ny orinasa | Martech Zone
Talata, Desambra 16, 2008 Talata, Martsa 2, 2021 Douglas Karr
Aza mino ahy? Ohatrinona ny vola azon'ny orinasanao amin'ny hevitra? Ohatrinona ny vola azon'ny orinasanao amin'ireo olona maneho hevitra ireo? Ohatrinona ny vola azon'ny orinasanao amin'ireo olona manome hevitra momba ny lahatsoratry ny media sosialinao?
Angamba tsy misy.
Fandraisana andraikitra, refesina amin'ny fanehoan-kevitra na fandraisana anjara, is hadalana ho an'ny ankamaroan'ny orinasa. maro manam-pahaizana Ireo metrôgy oddball ireto dia hilazana fa hitarika amin'ny fidiram-bola izy ireo, toy ny misintona bitro amin'ny satroka. Ireo dia ireo lehilahy ireo ihany izay nanao dokambarotra dokambarotra saribakoly sock tao amin'ny doka Super Bowl ho an'ireo orinasa izay tsy nanana orinasa.
Nisy olona nanaporofo ve fa misy ifandraisany amin'ny tranokala media sosialy na bilaogy iray izay nanaporofo ny fifandraisana mivantana teo amin'ny fiovam-po sy ny hevitra? Amin'ireo tranonkala hitako, ny fanehoan-kevitra dia nosoratan'olona izay mety tsy hividy mihitsy… namana, mpiara-miasa, mpanohitra, ary olona manandrana manangana fahefana an-tserasera. Amin'izy rehetra dia tsy isalasalana fa misy amin'izy ireo no hividy.
Ny fifamofoana dia tsy tokony refesina amin'ny fanehoan-kevitra na valiny amin'ny tambajotra sosialy raha tsy azonao atao ny mampifandray izany fifandraisana izany amin'ny vola miditra manaraka. Ny fanehoan-kevitra sy ny fifanakalozan-kevitra dia tsy tokony ho metrikan'ny fahombiazana na oviana na oviana raha tsy hoe afaka manaporofo ianao fa misy fiatraikany amin'ny tahan'ny fiovam-po.
The Exception: Reputation Online
Ny tombony ankolaka iray dia ny valinteny tsara amin'ny tambajotra sosialy, izay afaka manatsara ny lazan'orinasa an-tserasera - ary amin'ny farany mitarika mpanjifa na orinasa hafa hividy avy aminao miorina amin'io laza io. Ireo dera sy tolo-kevitra ireo dia tena volamena… saingy matetika dia sarotra ihany ny manao izany ao amin'ny media sosialy.
Te-ho tonga ve ianao mpifamofo miaraka amin'ny mpanjifanao? Eny! Ny fanontaniana dia: Moa ve ny olona izay dia mpifamofo raha ny marina mpanjifa? Tsia angamba!
Tsy miezaka ny hampiseho tsy fanajana aho na hanala ny fankasitrahana ananako ho an'ireo izay mandray anjara amin'ny bilaogiko. Tiako ny hevitra! Ny fanehoan-kevitra dia atiny ateraky ny mpampiasa izay inoako fa manampy amin'ny fitazonana ny pejiko ho velona amin'ny resaka sy amin'ny motera fikarohana. Midika an-kolaka izany ho fidiram-bola ho ahy satria afaka mampiseho fifandraisany mivantana na eo amin'ny fanehoan-kevitra isa sy ny isan'ny dokam-barotra tsindry aho.
Tsy mihazakazaka fanontana anefa ianao. Manana orinasa ianao.
Ka inona no atao hoe fampiroboroboana?
Ny fifamofoana dia antso an-tarobia, fangatahana demo, fisintomana voasoratra, fangatahana tolo-kevitra… na fividianana tena izy. Ny fifamofoana dia hetsika iray izay azo ifandraisany mivantana amin'ny vola miditra vokarin'ny fanatrehanao an-tserasera.
Raha handrefy ny fahombiazan'ny bilaoginao ny orinasanao dia mila manisa ny marina ianao Fiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny marketing:
ROMI = (Fiovam-po * vola azo) / (Vidiny manokana amin'ny asa-tanana + Vidin'ny sehatra manontolo)
Aleo esorintsika izany andraikitra hocus-pocus ary manomboka miresaka ny tena metrika fahombiazana… ohatrinona ny vola azon'ny orinasanao amin'ny alàlan'ny ezak'izy ireo amin'ny marketing nomerika.
Tena tsy sarotra izany. Ohatra iray ny fanekena farany nataon'i Dell fa afaka nanararaotra ny Twitter tamin'ny vola miditra $ 1,000,000 mahery izy ireo!
Refesina hoe fanisana! Raha mirotsaka amin'ny paikadin'ny media sosialy ny orinasanao dia mahafinaritra izany. Manaova marin-toetra, mangarahara, manokà làlam-pifandraisana amin'ireo olona andrandrainao (matetika ny mpikaroka) ary refeso ny vokatry ny asa mafy ataonao… amin'ny vola!
Tags: fanehoan-kevitra bilaogyfanehoan-kevitraandraikitrakpimarketing kpifanehoan-kevitra amin'ny tranokalafifandraisan'ny tranonkala
Tena sarotra ho an'ny orinasa ny mandrefy ny fifamatorana. Koa satria ny ankamaroan'izy ireo dia manakarama olona hitarika ny fampielezan-keviny ara-tsosialy (twitter, myspace, facebook, sns) dia mety tsy fantany izay ho refesina. Raha milaza ny consultant whiz bang fa mandeha izy dia tsy maintsy marina izany? Rehefa dinihina tokoa, dia nilaza foana izy hoe tena tsara tokoa izany ary tokony hodinihintsika ny fampitomboana ny tetibolan'ny doka.